“Voaloboka saosisy” Nepaley: Malaza ao amin’ny Fanjakana Britanika, tsy fantatra ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2018 6:13 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Italiano, 繁體中文, नेपाली, 日本語, English
Holboellia latifolia fantatra amin'ny hoe zavamaniry “voaloboka saosisy”. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr peganum. (CC BY-SA 2.0)
Manana lisitra botanika goavana ahitana karazan-javamaniry voninkazo miisa 6000 karazana i Nepal (avo efatra heny noho ny ao U.K.), ary maminavina ireo manampahaizana ara-javamaniry fa hahatratra karazana 6 600 ny isa rehefa trandrahana tanteraka ireo faritra lavidavitra kokoa. Manana ny 2,8 isanjaton'ny fitambaran'ny karazan-javamaniry manerantany i Nepal ary efa ho 2,8 isanjato amin'ny fitambaran'ny maneran-tany ny anjarany amin'ny karazan-javamany voninkazo.
Amin'ny fomba mahazatra,dia heverina fa mahomby amin'ny fitsaboana aretin'ny vanintaolana (Sikkim, India) ny voaloboka, ary ny tahony kosa, rehefa mivalona boribory, dia heverina fa manasitrana ny olana amin'ny taolana (Darjeeling, India).
Famariparitana mahaliana momba ny voankazo Holboellia latifolia hitan'ny @ArchiPlants tamin'ny herinandro lasa.
Nandeha tany Nepal tamin'ny taona 1971 i Roy Lancaster, Britanika mpamboly zavamaniry, mpitia zaridaina, mpanoratra sady mpandefa fandaharana ary nitondra voan-javamaniry 400, anisan'izany ny voaloboka saosisy, araka ny voalazan'ny bokiny A Plantsman in Nepal.
Efa tamin'ny tapaky ny taona 1800 tany ho any, tamin'ny fanjakazakan'ny fitondrana Britanika tany India ny fikarohana momba ny voaloboka saosisy. Nilaza ilay Nepaley mpahay zavamaniry Kamal Maden fa ilay Danoà mpandidy sady mpahay zavamaniry, Nathaniel Wallich no voalohany nandinika ny karazana voaloboka saosisy nandritra ny fiasany tany India mba hananganana ny Zaridaina Botanika ao Calcutta ary nomena ny anaran'ny namany mpahay vorona (ornithologue) Carl Peter Holboell ilay zavamaniry.
Niresaka tamin'ny Global Voices, nanamafy i Uttam Babu Shrestha, izay niasa momba ny zava-maniry Indiana nandritra ny dimy taona ary voatendry hikaroka literatiora sy hankatoa anarana zavamaniry ao amin'ny Oniversite Harvard hoe:
Maden kosa nanoratra esoeso momba ny voaloboka saosisy: